Johnny English Reborn 2011 – Myanmar Subtitles
Genre: Action, Adventure, Comedy, Crime Director: Oliver Parker Actors: Eric Carte, Roger Barclay, Rowan Atkinson, Togo Igawa Country: France, UK, USA Released: 21 Oct 2011 Score: 6.3 Duration: 101 min Quality: Bluray 720p Years: 2011 View: 1,665
Johnny English ကို ၂၀၀၃ မှာ ထုတ်ခဲ့ပြီး အပိုင်း(၂) Johnny English Reborn ကိုတော့ ရှစ်နှစ်အကြာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာမှ ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်၊ ဒီအပိုင်းကို ထုတ်လုပ်သူ ဒါရိုက်တာတော့ မတူတော့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းပုံစံအကြမ်းစားတွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မင်းသားကြီး Rowan Atkinson (Mr. Bean) ရဲ့ အလန်းစားဟာသတွေကတော့ ထပ်မြင်ရဦးမှာပါ….
အပိုင်း (၁) မှာ သမ္မတရဲ့ လုံခြုံရေးတာဝန်မအောင်မြင်ခဲ့လို့ အထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ Johnny ကိုစစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအတွက် လိုအပ်ချက်အရ ပြန်လည်ခေါ်ယူတာဝန်ပေးတာနဲ့ ဇာတ်လမ်းကို စထားပါတယ်… Johnny ပါမှ ရမယ်ဆိုတဲ့ စစ်ဆင်ရေးက ဘယ်လိုစစ်ဆင်‌ရေးမျိုးများလဲ၊ အရေးကြီးတဲ့ စစ်ဆင်ရေးမှာ ပါဝင်ရမှာဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရွတ်နောက်နောက် Johnny အတွက် အဆင်ပြေပါ့မလား…ဘယ်လို အလွဲတွေနဲ့ ဟာသတွေ ဖြစ်ဦးမလဲဆိုတာ ဒီအပိုင်းမှာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ…
ကျွန်တော်တို့ မင်းသားကြီး Rowan Atkinson (Mr. Bean) ရဲ့ ပရိသတ်တွေ အနေနဲ့ ကြည့်ပြီးလောက်ပြီးဖြစ်ပေမယ့် မရိုးနိုင်လောက်အောာင် ဟာသရော၊ အက်ရှင်မှာရော ပိုင်နိုင်တဲ့ အတွက် အတော်ကောင်းတာကြောင့် ပြန်ကြည့်ရရင်တောင် တန်တယ်ပြောလို့ ရပါတယ်…
Johnny English ကို ၂၀၀၃ မှာ ထုတျခဲ့ပွီး အပိုငျး(၂) Johnny English Reborn ကိုတော့ ရှဈနှဈအကွာ ၂၀၁၁ ခုနှဈမှာမှ ထုတျလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ၊ ဒီအပိုငျးကို ထုတျလုပျသူ ဒါရိုကျတာတော့ မတူတော့ပမေယျ့ ဇာတျလမျးပုံစံအကွမျးစားတှနေဲ့ ကြှနျတျောတို့ မငျးသားကွီး Rowan Atkinson (Mr. Bean) ရဲ့ အလနျးစားဟာသတှကေတော့ ထပျမွငျရဦးမှာပါ….
အပိုငျး (၁) မှာ သမ်မတရဲ့ လုံခွုံရေးတာဝနျမအောငျမွငျခဲ့လို့ အထုတျခံလိုကျရတဲ့ Johnny ကိုစဈဆငျရေးတဈခုအတှကျ လိုအပျခကျြအရ ပွနျလညျချေါယူတာဝနျပေးတာနဲ့ ဇာတျလမျးကို စထားပါတယျ… Johnny ပါမှ ရမယျဆိုတဲ့ စဈဆငျရေးက ဘယျလိုစဈဆငျ‌ရေးမြိုးမြားလဲ၊ အရေးကွီးတဲ့ စဈဆငျရေးမှာ ပါဝငျရမှာဆိုတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ ရှတျနောကျနောကျ Johnny အတှကျ အဆငျပွပေါ့မလား…ဘယျလို အလှဲတှနေဲ့ ဟာသတှေ ဖွဈဦးမလဲဆိုတာ ဒီအပိုငျးမှာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ…
ကြှနျတျောတို့ မငျးသားကွီး Rowan Atkinson (Mr. Bean) ရဲ့ ပရိသတျတှေ အနနေဲ့ ကွညျ့ပွီးလောကျပွီးဖွဈပမေယျ့ မရိုးနိုငျလောကျအောာငျ ဟာသရော၊ အကျရှငျမှာရော ပိုငျနိုငျတဲ့ အတှကျ အတျောကောငျးတာကွောငျ့ ပွနျကွညျ့ရရငျတောငျ တနျတယျပွောလို့ ရပါတယျ…
Encoded By Y2TK
Mega Myanmar 749Mb Download Mega Myanmar 749Mb Download Gcloud Myanmar 749Mb Download Gcloud Myanmar 749Mb Download
#Johnny English Reborn 2011 #Download Johnny English Reborn 2011 Full Movie #Free Johnny English Reborn 2011 Download